Nomad Mount Surface Mount for AirTags | Waxaan ka socdaa mac
Nomad Mount Surface Mount for AirTags
Waxaa jira qalabyo badan oo loogu talagalay Apple AirTags, xaaladdan oo kale, Noma wuxuu leeyahay saddex nooc oo daboollo ah oo waxtar weyn u yeelan kara adeegsadayaasha aaladahaan deegaanka lagu ogaanayo. Buurta Nomad Curved Surface, u oggolow adeegsadaha inuu ku dhajiyo meel kasta oo ay u dheer tahay inuu ka ilaaliyo biyaha, xoqida, boodhka, iwm ...
Kiiskani waa qalab kale oo ka duwan furaha caadiga ah ee aad ka heli karto AirTags, kiiskan waxa aan samaynayno waa inaan gelino aaladda gudaha nooca warqadda ah oo meel kasta dhig. Waa la ilaalin doonaa wakhti kasta runtiina waa la qarin doonaa.
Nomad ayaa bixiya saddex nooc oo ah Surface Curved la heli karo, mid kasta oo iyaga ka mid ah waxaa lagu sameeyaa waxyaabo kala duwan iyadoo ku xiran isticmaalka aan siin doonno. Nooca ugu adkaysiga badan wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah faybarka, laakiin sidoo kale waxaa jira nooc silikoon ah iyo waxa loogu yeero Powermesh.
Kan bixiya qolof fiber aramid (oo la mid ah fiber carbon) Waa marka loo eego Nomad aad u adkeysi badan waxayna u oggolaaneysaa ilaalinta hawada ee aadka u daran. Buurta qolofta adag waxay kuxirantahay xumbada naxdinta naxdinta leh si looga hortago inay kacaan oo ay wax u adkeeyaan, iyadoo si buuxda loo qarinayo ilaalinta dheeriga ah. Intaas waxaa sii dheer, xabagta ay ku darayaan ayaa laba jibbaar ka xoog badan marka way adkaan doontaa inuu ku soo dhaco ama ka jeexo meesha uu ku yaal
Waxay sidoo kale buugga ku leeyihiin tusaale ka samaysan silikoon tanina waa mid jilicsan oo u oggolaanaysa ilaalin ammaan ah AirTag laakiin iyada oo aan loo adkeynin sida xarigga. Buurta dusha sare ee qalooca ayaa lagu daboolay xumbada naxdinta leh si looga hortago in la jajabiyo oo qalabka loo ilaaliyo si aamin ah oo aamin ah.
Si loo dhammeeyo waxay muujinayaan a Powermesh waxay soo saartay qalab taas oo xoogaa ka fudud inta kale laakiin aan loo hurin adkaysiga badeecada. Tani waxay u oggolaaneysaa beddelka fudud iyo ka-saarista AirTag-ka gudaha gudaha tan iyo markii loogu talagalay in lagu keydiyo gudaha boorsada ama shandada. Miyaad si joogto ah u beddeleysaa shandadaha oo aad dooneysaa inaad la socoto waxyaabahaaga? Tani waa dookhaaga maadaama aan si fudud uga saari karno AirTag gudaha oo aan ku dari karno meelo kale.
Saddex nooc oo ah qalab Nomad qabow oo loogu talagalay dadka isticmaala AirTag.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Nomad Mount Surface Mount for AirTags
Apple waxay ku adkeysaneysaa shaqaalaheeda dhamaadka shaqada teleefonka bisha Sebtember
Ma jiro AirPods Pro cusub illaa 2022